सार्वजनिक यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ ? यातायात विभागले गर्यो यस्तो निर्णय — Sanchar Kendra
सार्वजनिक यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ ? यातायात विभागले गर्यो यस्तो निर्णय
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि यातायात विभागले अर्को नयाँ निर्णय गरेको छ । अब सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अब अनिवार्य फेस सिल्ड लगाउनुपर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषालले अब सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा यात्रुले अनिवार्य फेस सिल्ड प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। मास्क लगाएजस्तो अब यात्रुहरूले फेस सिल्ड पनि अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
साथै फेस सिल्डको व्यवस्थापन भने यात्रु आफैले गर्नुपर्ने भुषालले जनाए। उनले फेस सिल्ड नलगाउने यात्रुहरूले यात्रा गर्न नपाउने बताए। यसरी फेस सिल्डको प्रयोग गर्दा संक्रमण जोखिम कम हुने विभागको विश्वास छ ।
यसअघि भने सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्कको मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको थियो। अब भने मास्कसँगै फेस सिल्डको पनि अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। विभागले यो नियम यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न सर्वसाधरणलाई अपिल गरेको छ।
यस्तै नेपालीको महान् पर्व दशैँ शुरु भए पनि विगतका वर्षमा जस्तै चाडवाड मनाउन घर जाने यात्रु नहुँदा बसपार्क सुनसान बनेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण छ महिना बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात एक महिनादेखि खुले पनि यात्रु नहुँदा बसपार्क सुनसान बनेका हुन् ।
यस्तै केपी ओली सरकारले अबदेखि कोभिड १९ को परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताएको छ । कोभिड १९ को परीक्षण र उपचार खर्च नव्यहोर्ने सरकारले निर्णय गरेसंगै दशैंकाे मुखैमा जनता निरास बनेका छन् ।
सबै निजी र सहकारी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले कम्तीमा ५० प्रतिशत सबै किसिमका शय्या, आईसीयू लगायतका पूर्वाधारहरु कोभिड १९ को उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने भएको छ ।
रिहा भएलगत्तै लिनाले चर्चित गायक प्रमोद खरेललाई फेसबुकबाट दिइन यस्तो कडा जवाफ, खरेल तनावमा
नेकपा समूहले आ’क्र’मण गरेपछि नेपाली कांग्रेसका एक नेताको मृत्यु, वडाध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ
संसद विघटन मुद्दामा अब १५ मिनेट मात्र बहस गर्न पाइने